Reining - Soavaly Noti | Soavaly Noti
El fikolokoloana dia fanatanjahantena mpitaingina soavaly izay tsy maintsy ahombiazan'ny mpitaingin-tsoavaly andiany maro hanehoana ny fahaizan'ny biby sy ny fanatanterahana ny baikon'ny mpitaingina, ankoatry ny fanatanterahana ny soatoavin'ny haingana, satria io no iray amin'ireo fepetra ilaina indrindra amin'ny fiompiana.
Safidy maro no omena lanja, izay hihaonantsika amin'ity habakabaka ity, izy rehetra dia ilaina mba hahatakarana ity fanatanjahantena ity.
Ao amin'ity habakabaka ity ho hitanao ny zava-drehetra mifandraika amin'ny fiompiana, toro-hevitra, antsipiriany, hevitra, fitaovana, fifaninanana ary inona no tsy maintsy raisinao mba hankafizanao tanteraka ity fifehezana ity, io no iray amin'ireo sarotra indrindra satria tsy maintsy mampifangaro ny hafainganana sy ny fahalavorariana.
Fantatrao ve fa ny soavaly dia ny biby soavaly be mpampiasa indrindra eny an-tsahan'ady? Ny tantaran'ny ...
American re inona izany?
Fitsipi-pifehezana izay anaovan'ilay soavaly andian-dahatsoratra tena mahomby sy haingam-pandeha amin'ny ...
Ny fifaninanana tandrefana dia fifehezana ofisialy izay ao anatin'ny fifaninanana iraisam-pirenena ary na ny fety aza satria mazava ...